Kuyathengiswa izimoto zamaGear, amagiya amancane ayathengiswa, i-gear dc motor, i-hydraulic gear motors, amagiya wensimbi ayathengiswa, amagiya ensimbi ayathengiswa
K uchungechunge lwe-K uchungechunge lwama-helical gear spiral bevel gear (ukugaya amagiya, ukusebenza kahle kokudluliselwa), iBevel gear motor luhlobo lokwehlisa amagiya. Kuyimoto ekhethekile yegiya yama-reactors ahlukahlukene. Igiya layo lisebenzisa uhlobo lwegiya le-Gleason quasi-hyperbolic, kanti igiya liqinile. Inomthamo omkhulu wokuzala nomsindo ophansi. Impilo ende, ukusebenza kahle okukhulu, ukusebenza okuzinzile, njll. Ukusebenza kwawo wonke umshini ungcono kakhulu kune-cycloid minimer motor kanye ne-worm gear minimer motor, eye yaqashelwa kabanzi futhi yasebenza ngabasebenzisi. Le moto elungiselelwe iqhutshwa ngebhande le-V. Le moto iqhutshwa yibhande ukushayela ingxenye yokufaka. Ifektri ifakwe ibhande le-V elijwayelekile. Lapho usebenzisa i-motor ukuqhuma-proof motor, kufanele kusetshenziswe i-anti-static V-ibhande (ifakwe umsebenzisi).
1. K uchungechunge lwamagiya motor lwenziwa ngokuhambisana nezidingo zobuchwepheshe zomhlaba wonke futhi unokuqukethwe okuphezulu kwesayensi nezobuchwepheshe.
2. Lolu chungechunge lwegiya motor longa isikhala, luthembekile futhi luhlala isikhathi eside, futhi lunomthamo omningi wokulayisha, futhi amandla angafinyelela ngaphezu kwe-200KW.
3, Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, ukusebenza okuphezulu, ukusebenza kahle kwegiya kufika ku-95%.
4. K uchungechunge oluyi-motor spiral bevel gear lunokudlidliza okuphansi, umsindo ophansi kanye nokonga okuphezulu kwamandla.
I-5, khetha okokusebenza okuhle kwe-20CrMnTi, futhi ngemuva kokuqothula kanye nokuqeda ukwelashwa okushisa, ubulukhuni bangaphezulu bungafinyelela ku-58-62HRC, ukucubungula izinyo lokugaya, ukucacisa kungafinyelela ku-5-6, ngokulungiswa okuphezulu kokucacisa, ukuhambisa okuzinzile, umthamo omncane ophethe umthamo, Impilo ende nezinye izici.
6. Ngemuva kwemishini yokucacisa kahle, i-gear gear eyakha i-helical gear, i-bevel gear kanye ne-bevel gear transmit Assembly ifakwe izinhlobo ezahlukahlukene zemotorque ukwakha ukuhlanganiswa kwe-elekthronikhi, okuqinisekisa ngokuphelele izici zekhwalithi yemikhiqizo yezimoto eyenzelwe lokhu.
Ama-Sogears Motors nama-Generator anikeza uhla olubanzi lwekhwalithi ethembekile nephakeme futhi ehlanganiswe nama-motors kagesi namajenereyitha aklanyelwe ukusebenza ngokuthembekile noma ngabe uluhlobo luni lomona. Abahlinzeki be-Sogears Value baletha ukunikezwa okugunyaziwe kokuthengisa, ukuxhaswa, insizakalo.
Isilinganiso sobubanzi besilinganiso: inhlanganisela eyisisekelo engu-5.36 ~ 197.37, K uchungechunge / R yochungechunge ingafinyelela ku-32625
Ibanga leTorque: 200 ～ 50000 Nm
Ibanga lamandla: 0.18 ~ 200 kW
Isandiso se-K-shaft, ukukhwela unyawo kwe-KA-shaft
Isandiso se-KF-shaft, ukukhwezwa kwe-Flange kwe-KAF-shaft, ukukhwela kwe-flange
I-S- ibonisa okokufaka kwe-eksisi Lolu chungechunge lucishe lufane ne-S series gear motor futhi lungasetshenziswa ngokushintshana. Kodwa-ke, ngaphansi kwesisekelo sesilinganiso esifanayo sejubane, amandla afanayo nenombolo efanayo yohlaka, i-torque ekhishwa yochungechunge lwe-K inkulu kakhulu kunenqubo ekhishwa yemoto eyi-S series gear.
Izinhlobo eziphambili zama-K uchungechunge wama-motor motors yilezi: K / KA / KAF37, K / KA / KAF47, K / KA / KAF57, K / KA / KAF67, K / KA / KAF77, K / KA / KAF87, K / KA / I-KAF97, K / KA / KAF107, K / KA / KAF127, K / KA / KAF157, K / KA / KAF167, K / KA / KAF187
1.Isikhumulo semikhumbi nokuthumela
2.Hoist and ezokuthutha
5. Ukwakhiwa nokwakhiwa
Imboni ye-6.Paper ne-light
7.Imboni yezokuvikela kanye nokuvikela imvelo.Etc.
Ukuhlukaniswa kwezimoto ze-bevel gear
Injini yokunciphisa i-bevel gear ingahlukaniswa ngamazinyo aqondile, amazinyo angama-helical kanye namazinyo agobile ngokuma komugqa wezinyo; amazinyo agobile ahlukaniswe ngamazinyo e-arc, amazinyo amade we-cycloidal (abizwa ngokuthi ngamazinyo e-cycloidal) kanye namazinyo we-quasi-obliute. Yize izinyo le-helical likhulu kancane kunelezinyo eliqondile, lithinta kakhulu iphutha, ngakho-ke kancane kancane lithathwa indawo yezinyo eligobile. Amagiya we-quasi-obliute bevel ane-hobs tapered awaphansi kakhulu ngokuncintisana ngamazinyo e-arc namagiya we-cycloidal bevel ngenxa yamathuluzi ayinkimbinkimbi futhi anzima ukulawula indawo yokuxhumana yendawo yezinyo. Basusiwe futhi abaze bangeniswa eChina. Lolu hlobo lomshini wokugaya amagiya.
Thola i-helical bevel gear gear Insalela ye-1/2 HP, i-3/4 HP, i-2 HP imishini yamagesi kagesi iyathengiswa evela eChina ama-sogears adumile e-china futhi nge-1 / 3HP Reliance Duty-Master Motor ene-Gear Reducer ratio ka-40: 1. Lolu chungechunge lwezinjini ezincane zamagiya lunamandla emoto engu-4kW-250kW Isaziso maqondana nokuyekiswa komkhiqizo: Siyayeka ukuthengisa izinhlobo ezithile ze-K series ezithengiswayo. Ngokuhlangana nama-AC motors abekwe ngqo ama-sogears Modular geared motor system yenza i-compact drive yezinhlobonhlobo zezicelo.
Isakhiwo semoto ye-bevel gear iyisandiso se-K-shaft, ukukhuphuka kwezinyawo, ukukhwela i-KA-shaft, isandiso se-KF-shaft, ukukhwela kwe-flange, ukukhwela kwe-KAF-shaft, ukukhwela kwe-flange, i-KS- ibonisa okokufaka shaft
Amapharamitha ayo obuchwepheshe ngokuvamile:
Amandla: 0.12KW ~ 200KW
I-Torque: 10N · m kuya ku-58500N · m
Ijubane lokukhipha: 0.08 ~ 263r / min
Lo gearbox ongu-10-120: 1 onemoto kagesi unemoto esezingeni eliphansi futhi unikeza amandla nejubane elilingana ne-RC servo ngenani elincane lezindleko.
I-K series ye-gear helical-bevel motor, izindleko eziphansi ze-AC gear motor kanye ne-torque motor ene-gearbox, 3, 5, 6, 200 21 izinhlobo ezahlukene ze-gear ratio ongayikhetha. Inamandla angu-20 KW ne-torque elinganisiwe engu-1350 rpm. Sichazile ukuthi isivinini sezimoto sehluka kanjani phakathi kwama-AC ne-DC motors nezindlela abenza ngazo i-torue. Nge-A gearbox -okunye eyaziwa ngokuthi i-gear reducer noma izinciphisi zejubane, iqukethe imoto kagesi, amagiya, namabherethi endlini futhi kuvame ukusetshenziswa ezinhlelweni zokusebenza ezidinga amandla amakhulu (i-torque).
The i-helical-bevel gear motor, eyaziwa nangokuthi i-K-series kunciphisa, isesimweni sokudlulisela esiteji ezintathu esakhiwe ngamaqoqo amabili egiya elinamandla kanye nesethi yamagiya ka-bevel. Lolu hlobo lokudlulisela lunokusebenza okuphezulu, ukuqina okuphezulu, i-torque ephezulu, umthamo oqinile wokuthwala nomsindo ophansi. Ingafaniswa ne-servo motor bese isebenza nge-motor yesigaba esine-asynchronous. I-servo minimer helical gear minimer ekhiqizwa yinkampani inempilo ende yokusebenza ne-torque enkulu.
Ama-Gear Motors enziwa ngochungechunge lwamamodeli amathathu anokushintshwa okusukela kushaft ne-design yethu eyingqayizivele yamazinyo egiya kanye nezinsimbi zokubamba kunikezela ngokuthula, ukusebenza okubushelelezi kunoma imaphi amandla nobungako. Usizo luhlala lutholakala kusuka kumakhasimende ethu, ukuthengisa.
Kusetshenziswe kahle emshinini wokudla, imishini yokuphrinta, imishini ye-metallological, i-wire kanye nentambo yemishini, umshini wokuhambisa, imishini yamakhemikhali, imishini yezindwangu, ukuphrinta nokusebenzisa imishini yokudaya nemishini yemithi.
Ama-sogears wethu weGear Motors kusuka ku-Surplus Sales yomkhiqizi ngqo. Ama-motor we-AC ne-DC, ukuvumelanisa, ukubuyisela emuva, ipuleti lokufaka imoto. 1.9 RPM 115 Volt AC 100 in-lb Sogears Gearmotor. Inombolo Yento: 5-1820-2 5 Kusesitokweni Thenga iGear Motor ngentengo engcono kakhulu e-China noma e-India kwa-Sogears. Uhla olukhulu lwama-Motors we-Geared endaweni yethu yokugcina izinto, Intengo Yesitolo esidayisa yonke impahla nokuThunyelwa kwamahhala.
Okwe-Sogears 'Sub-Fractional Gearmotors. ama-VFD ethu amasha avumela ama-gearmotors afakwe emishini ejwayele ukutholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene ezahlukahlukene. IMotor & Gear Engineering, besingumholi osezingeni lomhlaba kwezokuklama, ubunjiniyela kanye nokukhiqizwa kwamagiya nemiphini. Ukuthengisa nokulungisa ama-Electric Motors namaDrayivu.
Umjikelezi we-cycloidal bevel gear wemukela amazinyo we-contour, futhi ukuphakama kwamazinyo endaweni ngayinye eceleni kwesigaxa senkomba kuhlale njalo; i-spur, helical and spiral bevel gear minimers yamukela amazinyo e-contraction, kusukela ekugcineni okukhulu (ukuphela kwangaphandle) kwamazinyo. Kanye ne-indexing cone busbar eya ekugcineni okuncane (ukuphela kwangaphakathi) kwamazinyo, ukuphakama kwamazinyo kuyancipha kancane kancane.
Ama-Sogears AC Gearmotors ayatholakala ezinhlotsheni ezahlukahlukene ezisukela ku-15 kuye ku-1827 in-lbs kuzo zombili izingqimba ezingakwesokudla nakwimiklamo ye-shaft efanayo nemboni. Ama-OUR Gearmotors & Isinciphisi Esivinini Esithengiswayo emhlabeni wonke, IZIMOTO EZINTSHA ZaseMpumalanga 1/19 HP Isigaba Esisodwa seGearmotor. Yokusungula: GEA2049. Isilinganiselo ku-1: 0. Umkhiqizi: ama-sogears.
I-motor ye-bevel gear yokuqondisa enamandla inamandla amancane we-axial kanye nohlelo olulula lokusekela; kodwa-ke, izinga lokuhlangana lincane, iphutha liyazwela, futhi umsindo mkhulu. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukuthunyelwa kwejubane okuphathelene nokushesha okufana nokuhluka kwezimoto namagiya asindayo wemishini.
Uma kuqhathaniswa namagiya akhangayo namagiya we-helical bevel, amagiya ama-curve bevel anezinga elikhulu lokuhlangana, futhi izindawo zokuxhumana zamazinyo zine-radius enkulu ye-curvature; izindawo zokuxhumana ezingaphansi kwamazinyo kulula ukuzilawula; azinaki kangako emaphutheni. Ngenxa yomthamo ophakeme kakhulu, okudluliselwe kuzinzile futhi umsindo uphansi. Imvamisa esetshenziswa ekudluliseni okufana nokushayela okuphakathi kwezimoto ezahlukahlukene, ogandaganda kanye nama-helikopta.
I-Shaft Dia. (Mm)
Ukukhishwa kwe-Flange Dia. (Mm)
I-Torque evumelekile (Nm)
1. Ukukhishwa okumile, ukwakheka okuqinile, ukuhanjiswa okuphezulu kwethoshi ebusweni bezinyo elilukhuni, amagiya aqonde kahle okuphezulu kuqinisekisa ukusebenza okuzinzile, umsindo ophansi nempilo ende yokusebenza.
2, indlela yokufaka: ukufakwa konyawo, ukufakwa okumbumbulu komgodi, ukufakwa kwe-flange, ukufakwa kwengalo ye-torque, ukufakwa okuncane kweflange.
3. Imodi yokufaka: ukuxhumana okuqondile kwemoto, ukuxhumana kwebhande lezimoto noma ishafa yokufaka, ukuhlanganisa okokufaka kwe-flange.
4. Imodi yokuphuma: ukuphuma komgodi wokufaka umgodi noma umgodi oqinile wokuqina, ukusebenza kahle okuphakathi kungama-94%.
I-5, nenhlanganisela ye-R ingathola isivinini esikhudlwana.
Kuma-gearmotors amakhulu, ama-motors, ama-shaft gearmotors afanayo, nezinciphisi zejubane lemoto, singashintsha ama-gearmotors angama-90V noma ama-180VDC athengiswa ngabakwa-sogears, Uma ufonela umphathi wezentengiso wesifunda kagesi ukuze akuphendule, sizokuphendula.
ISogears Electric Motor ibheka ukuthengisa nokulungisa ama-motors kagesi, amaphampu, ukudluliswa kwamandla, nemishini yezimboni ehlobene nayo.
Ukusetshenziswa kwezimoto ze-bevel gear:
Manje sekubonakala kakhulu ezinhlelweni zokudlulisela zezinhlobo ezahlukahlukene zemishini, kusuka emikhunjini, ezimotweni, ezimotweni, emishini esindayo yokwakha, emishini yokusebenza kanye nemishini yokukhiqiza esetshenziswa embonini yemishini, kuya esivame kakhulu empilweni yethu yansuku zonke. Izinto zasendlini, amawashi, njll. Izicelo zalo ziqala kusuka ekudluliseleni kwamandla amakhulu kuya emithwalweni emincane, ukuhanjiswa okuqondile kwe-angular, nakuhlelo lokusebenza lwezezimboni, ama-motors aklanyelwe ukwanda nokudonsa kwethoshi. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi kumishini yokuguqula ijubane ne-torque. I-Bevel gear motor iyimoto yangaphandle ye-meshing othomathikhi ye-helical gear ekhiqizwe yi-ZBJ19004 kazwelonke ejwayelekile. Kusetshenziswa kabanzi kwezinsimbi, ezokumbiwa phansi, ukuphakamisa, ezokuhamba, usimende, ukwakhiwa, amakhemikhali, izindwangu, ukuphrinta nokudaya, ezemithi nokunye. insimu.
Ngisho ne-250 HP Electric Motors singayihlanganisa nama-gear motors ethu futhi iyathengiswa. Njengomhlinzeki wezimoto zomhlaba wonke, sinikela ngezinhlobo ezihlukile ze-AC Motors kanye neDC Motors kufaka phakathi iTraction Motors, uhlobo oluvundlile nolumile. Ukuletha noma yikuphi emhlabeni kusuka eChina, iSogears Direct inikeza ukukhetha okuhle kakhulu nolwazi lwama-motors kagesi, izingxenye ezisele, ama-geard motors nezinye izinsimbi ukubathola abakudingayo.